Alexis Sanchez oo laga qaaday Liisankiisa Baabuurka isla markaana Maxkamad la soo taagi doono…(Goorma?) – Gool FM
Alexis Sanchez oo laga qaaday Liisankiisa Baabuurka isla markaana Maxkamad la soo taagi doono…(Goorma?)
(Chile) 27 Mar 2017. Dhaliyaha Arsenal Alexis Sanchez ayaa la ganaaxay oo laga qaaday Liisankiisa Baabuurka isla markaana loo sheegay goorta maxakamadda la soo taagi doono kaddib xawaare sare uu baabuurkiisa ku waday.
Sanchez ayaa lagu qabtay caasimada Chile ee Santiago isagoo baabuurkiisa ku wada xawaare dhan 96mph meel loogu tala galay in lagu wado 75mph .
Sida ay sheegeyso jariiradda AS in Sanchez lagu wargaliyay inuu iska soo xaadiriyo maxkamadda Buin ee ku taala koofurta Santiago marka ay taariikhdu ku beegan tahay 12-ka bisha Abriil.
Taariikhda maxkamadda laga balamiyay xiddiga reer Chile ayaa ku beegan labo maalmood uun kaddib marka ay Crystal Palace Premier League ku marti galiso wiilasha Arsene Wenger.
Tababaraha xulka Chile Juan Antonio Pizzi ayaa maalin fasax ah ka siyay tababarka xiddigaha xulka ka hor kulankooda Talaadada ay la yeelan doonaan Venezuela isreeb-reebka koobka adduunka.
Alexis Sanchez ayaa la xusuustaa inuu caradiisa si daran ugu muujiyay saaxiibadiisa kooxda markii ay guul darada kala soo kulmeen xulka Argentina isreeb-reebka koobka adduunka balse waji furan ayuu ku marxabeeyay markii ay dib tababarka ugu soo laabteen.
Muxuu Daley Blind ka yiri in Aabihii Danny Blind laga ceyriyay xilka tababaranimo ee xulka Holland??
Kullamo ka tirsan horyaalka Soomaaliya oo galabta la ciyaari doono